Customized Handmade Mosaic Art Painting Wall Decor ﻿ Item: Customized handmade mosaic art painting wall decor Material: သငျသညျဖန်သို့မဟုတ်စကျင်ကျောက်ရှေးခယျြနိုငျ(stone) သို့မဟုတ်ကြွေထည်ပစ္စည်း. မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Glossy or matte Size: Sold by the square foot. Customized to your desired size. အထူ: 4mm Weight： 1m2= 8 ကီလိုဂရမ် (17.4…
Dolphins Handcrafted Mosaic mural for Floor and Pool ﻿ Manufacturer: KST MOSAIC, We own factory located in Foshan city Guangdong Province, တရုတ်နိုင်ငံ. အချက်: Dolphins Hand Made Mosaic Decorative Wall Floor Bath Pool Material: glass, and you can choose marble(သဘာဝအလျောက်ကျောက်များ) သို့မဟုတ်ကြွေထည်ပစ္စည်း. မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Glossy or matte Size: Design…
Handcrafted Mosaic mural suppliers for wall Material: glass，and we have marble(သဘာဝအလျောက်ကျောက်များ) ceramic of you to choose. မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Glossy or matt Size: customized to the size you need. အထူ: 4mm Weight: 1m2=8kg(17.4 lbs) သက်ဆိုင်မြင်ကွင်းတစ်ခု： အသုံးပြုခြင်းနှင့် display ကိုနေရာများတွင်န့်အသတ်ရှိပါတယ်! ထုတ်လုပ်မှုအချိန်: customizedof the design, it will…
Handcrafted Mosaic Mural for logo design ﻿﻿ Item: Mosaic art logo design Manufacturer: KST MOSAIC factory Material glass, You can choose marble(သဘာဝအလျောက်ကျောက်များ) သို့မဟုတ်ကြွေထည်ပစ္စည်း. မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Glossy or matte Size: Design Customized to order Thickness: 4mm Weight: 1m2=8kg(17.4 lbs) သက်ဆိုင်မြင်ကွင်းတစ်ခု： အသုံးပြုခြင်းနှင့် display ကိုနေရာများတွင်န့်အသတ်ရှိပါတယ်!…
Handcrafted Mosaic Mural for home decoration Manufacturer: KST ရောင်စုံစီချယ်စက်ရုံ, We own factory located in Foshan and Yunfu.Guangdong Province, တရုတ်နိုင်ငံ. အချက်: Mosaic artwork home decor Material: သငျသညျဖန်သို့မဟုတ်စကျင်ကျောက်ရှေးခယျြနိုငျ(သဘာဝအလျောက်ကျောက်များ) သို့မဟုတ်ကြွေထည်ပစ္စည်း. မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Glossy or matte Size: Design can be customized as to size and/…
Handcrafted Mosaic Mural and handmade mosaic ﻿ Item: Mosaic Artwork - Abstract White Black horse of handcrafted mosaic mural and handmade mosaic Material: glass，and we have marble(သဘာဝအလျောက်ကျောက်များ) ceramic of you to choose. အရွယ်: customized to the size you need. သက်ဆိုင်မြင်ကွင်းတစ်ခု： အသုံးပြုခြင်းနှင့် display ကိုနေရာများတွင်န့်အသတ်ရှိပါတယ်!…
Customized butterfly collage flower crystal mural Item: Customized butterfly collage flower crystal mural Material: Crystal glass Sheet size: 300*300မီလီမီတာ, 318*318 mm Chip size: 10*10 မီလီမီတာ, 25*25 mm Surface finish: Glossy Certificates: Shipping: 5~10days lead time. By vessel,DHL/TNT/FedEx express, air freight etc. Delivery & Service: Timely delivery each time. Provide reliable service…
Custom crystal bedroom wall decor Mosaic mural medallion Item: Custom crystal bedroom wall decor collage mural mosaic Model Number： Hello Kitty mural Material: Glass Sheet size: 300*300မီလီမီတာ, 318*318 mm Chip size: 25*25မီလီမီတာ, 10*10 mm Surface finish: Glossy Shipping: 5~10days lead time. By vessel,DHL/TNT/FedEx express, air freight etc. Delivery &…
Rose pattern Mosaic mural medallion wall decor Item: Rose pattern crystal material custom mosaic Model Number： Rose mural Material: Glass Sheet size: 300*300မီလီမီတာ, 318*318 mm Chip size: 10*10မီလီမီတာ, or customized size Surface finish: Glossy Shipping: 5~10days lead time. By vessel, DHL/TNT/FedEx express, air freight etc. Delivery & Service: Timely…
မီးဖိုချောင် backsplash များအတွက်ရာဇမတ်ကွက်ပုံစံမျိုးမောရှေနံရံဆောင်လည်ဆွဲကလေးကို
Lattice decor Mosaic mural medallion for kitchen backsplash Item: Lattice decor custom mural for mix-glass Material: Glass Sheet size: 300*300 mm Chip size: 15*15 မီလီမီတာ, 25*25mm Surface finish: Glossy Delivery &Shipping 5~10days lead time. By vessel, DHL/TNT/FedEx express, air freight etc. OEM/ODM Accept Package Standard cartons and wooden pallets…
အသကျရှငျခန်းများအတွက် Glass ကို mosaic မောရှေနံရံဆောင်လည်ဆွဲကလေးကို
Glass mosaic Mosaic mural medallion for living rooms Item: Glass mosaic collage wall mural for rose flower Model Number： Glass mural Material: Glass Sheet size: 300*300မီလီမီတာ, 326*326mm Chip size: 15*15မီလီမီတာ, or customized Surface finish: Glossy Shipping: 5~10days lead time. By vessel, DHL/TNT/FedEx express, air freight etc. Delivery & Service:…
မြို့ရိုးကိုအလှဆင်ဘို့တရုတ်ပန်းချီ၏ Handcrafted mosaic
Handcrafted mosaic of Chinese painting for wall decoration Backside process: Mesh backing Production time: 10-15 Days Facility: ကျနော်တို့ဖန်မီးဖိုများ, ဖန်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, injet စက်နှင့်ကြီးမားသောဖြတ်တောက်ခြင်းစက်နှင့်အတူ, ဒါကြောင့်အပေါ်စက်နှင့် waterjet စက် polishing. ပစ္စည်း: သငျသညျဖန်သို့မဟုတ်စကျင်ကျောက်ရှေးခယျြနိုငျ(သဘာဝအလျောက်ကျောက်များ) သို့မဟုတ်ကြွေထည်ပစ္စည်း. အထုပ်:…
Hand crafted mosaic for painting Backside process: Mesh backing Production time: 10-15 Days Facility: ကျနော်တို့ဖန်မီးဖိုများ, ဖန်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, injet စက်နှင့်ကြီးမားသောဖြတ်တောက်ခြင်းစက်နှင့်အတူ, ဒါကြောင့်အပေါ်စက်နှင့် waterjet စက် polishing. ပစ္စည်း: သငျသညျဖန်သို့မဟုတ်စကျင်ကျောက်ရှေးခယျြနိုငျ(သဘာဝအလျောက်ကျောက်များ) သို့မဟုတ်ကြွေထည်ပစ္စည်း. အထုပ်: cut into pieces…